गणेश थापाविरुद्ध पुनः छानबिन शुरू, ५८ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लाग्ला ?
काठमाडौं–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनः छानबिन थालेको छ ।
लोकमान सिंह कार्की ‘प्रमुख आयुक्त’ रहेका बेला तामेलीमा राखिएको गणेश थापाको मुद्दामाथि नवीनकुमार घिमिरे प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएपछि पुनः छानबिन थालिएको हो ।
यस्तो थियो थापामाथिको मुद्दा
१५ वर्षसम्म नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टीमको सदस्य रहेका थापा २ दशकसम्म अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा)को नेतृत्वमा रहे । तर, विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)ले सन् २०१५ नोभेम्बर १५ (३० कात्तिक २०७२) मा थापामाथि १० वर्षको प्रतिवन्ध लगायो । फिफाले उनीसँग ११ हजार ८ सय ७० अमेरिकी डलर जरिवाना पनि तिरायो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाका भाइसमेत रहेका गणेश थापा दाइ कमल थापाकै विशेष जोडवलमा सांसद बनेका थिए
सन् २००९ र २०११ को फिफा कार्यकारिणी सभाको लागि भएको निर्वाचनमा थापाले व्यक्तिगत र पारिवारिक लाभका लागि घुस लिएको फिफाले आरोप लगाएको थियो ।
थापाविरुद्ध ५८ करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा
फिफाले निलम्बन गर्नु अगाडि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले थापामाथि अनुसन्धान गरेको थियो । २ दशकसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका थापा २०७० को संविधानसभा निर्वाचनपछि संसदमा समेत मनोनित भएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्व. सुशील कोराइला नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले थापालाई सांसदमा मनोनित गरेका थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाका भाइसमेत रहेका गणेश थापा दाइ कमल थापाकै विशेष जोडवलमा सांसद बनेका थिए । पछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एन्फाको नेतृत्वमा रहँदा थापाले ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता गरेको भन्दै सांसद पदबाट निलम्बन गरिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, खेलकुद मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई थापामाथि अनुसन्धान गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न दिर्नेशन दिएको थियो ।
लेखा समितिको नजरमा थापाले गरेको ‘भ्रष्टाचार’
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)मा भएको आर्थिक अनियमितताबारे छानबिन गरेको लेखा समितिले अनियमितताको ‘प्रमुख दोषी’ गणेश थापालाई किटान गरेको थियो ।
थापाले नेतृत्व सम्हालेको बेला एन्फामा चरम आर्थिक अनियमितता भएको लेखा समितिले छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरको थियो ।
लेखा समितिले गरेको छानबिनअनुसार गणेश थापाका छोरा गौरवले २ किस्तामा गरी १ लाख अमेरिकी डलर (त्यतिबेलाको सटही दरअनुसार ९७ लाख १५ हजार रुपैयाँ लिएका थिए ।
यस्तै थापा स्वयंले नै एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)का तत्कालीन अध्यक्षको केम्को कन्स्ट्रक्सन नामक कम्पनीबाट १ लाख १५ लाख अमेरिकी डलर (त्यतिबेलाको सटही दरअनुसार १ करोड ११ लाख ७२ हजार २ सय ५० रुपैयाँ) लिएका थिए ।
थापाले एन्फामा रहँदा ५८ करोड १७ लाख १२ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ हिनामिना गरेको लेखा समितिले निष्कर्श निकालेको थियो
थापाले गोल प्रोजेक्टका लागि सन् २००१ देखि २०१२ सम्म ४ किस्तामा लिएको १८ लाख अमेरिकी डलर (१७ करोड ४८ लाख ७० हजार रुपैयाँ) हिनामिना गरेको पनि लेखा समितिको छानबिनबाट फेला परेको थियो ।
यस्तै धरान, ललितपुर र बुटवलको एन्फा कम्प्लेक्सबाट उठेकोमध्ये २० प्रतिशत रकम ४ करोड ३७ लाख १७ करोड ५ सय रुपैयाँ हिनामिना गरेको पनि संसदीय समितिको छानबिनबाट पत्ता लागेको थियो ।
एडीआई २७ कार्यक्रमअन्तर्गत फिफाले रेफ्री, प्रशिक्षक र कर्मचारीका लागि दिएको १२ करोड २४ लाख ९ हजार रुपैयाँ पनि थापाले हिनामिना गरेको संसदीय छानबिन समितिले फेला पारेको थियो । रेफ्री, प्रशिक्षक र कर्मचारीका लागि आएको रकममध्ये थोरै मात्रै उनीहरुलाई दिएर बाँकी रकम हिनामिना भएको लेखा समितिको निष्कर्श थियो ।
सन् २०१३ मा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिपको टिकट बिक्रीमा पनि थापाले अनियमितता गरेको लेखा समितिको छानबिनबाट फेला परेको थियो । साफ च्याम्पियनसिपको बेला ३ करोड रुपैयाँको गेट टिकट बिक्री भएपनि ९० लाखको मात्रै टिकट बिक्री गरेको देखाएर बाँकी २ करोड १० लाख रुपैयाँ हिनामिना गरिएको छानबिनबाट पत्ता लागेको थियो ।
यस्तै एन्फाका साथी संस्थाबाट प्रापत भएको १ करोड ४५ लाख ७२ हजार ५ सय रुपैयाँ पनि थापाले हिनामिना गरेको लेखा समितिले ठहर गरेको थियो । थापाले एन्फामा रहँदा ५८ करोड १७ लाख १२ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ हिनामिना गरेको लेखा समितिले निष्कर्श निकालेको थियो ।
घिमिरेको विशेष चाहनामा पुनः छानबिन
लेखा समितिले १२ असोज २०७२ मा लेखा समिति र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्र लेख्दै थापामाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकामानसिंह कार्कीले थापामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएनन् ।
पछि फिफाले थापालाई १० वर्ष प्रतिवन्ध लगाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै जरिवाना समेत तिराएपछि अख्तियारले उनीमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । तर, बीचमै कुनै पनि तथ्य फेला नपरेको भन्दै अनुसन्धान स्थगित गरेर मुद्दा तामेलीमा राखिएको थियो ।
अख्तियारबाट लोकमानको बहिर्गमनपछि दीप बस्न्यातले पनि थापाविरुद्धको मुद्दा अगाडि बढाएनन् । बस्न्यात प्रमुख आयुक्त रहेकै बेलामा थापाविरुद्ध अख्तियारमा अर्को मुद्दा पनि परेको थियो । तर, बस्न्यात नेतृत्वको तत्कालीन आयोगको वैठकको निर्णयानुसार थापाविरुद्धको मुद्दा तामेलीमा राखियो ।
गत असोज ४ गते प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका नवीनकुमार घिमिरेको विशेष चाहनामा थापाको मुद्दामाथि पुनः छानबिन शुरु भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक अधिकारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार गणेश थापाविरुद्धको मुद्दामा ३ जनासँग बयान समेत लिइसकिएको छ । थापाले नेतृत्व गर्दा एन्फामा रहेका कर्मचारी र थापाका केही आफन्तको बयान लिइएको स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।